Sina 1250 harato novolavolaina sy orinasa mpanamboatra barium sulfate Soavaly tsiroaroa
Telefaona: +86 316 7106119
Dioksidan'ny titane malemy 505
Lithopone fotsifotsy avo lenta BA311
Manatsara fiara kalsioma mavesatra ...
1250 harato superfine precipi ...
1250 bolongam-pandrefesana barium sulfate mihombo
Izy io dia novokarin'ny fizotry ny rotsakorana simika mandroso, miaraka amin'ny toetra ara-batana ambony, tsy dia maloto mekanika, fahamendrehana tena mitovy, vovoka fotsy tsy misy fotony, tsy misy poizina, tsy mety levona anaty rano, mety levona amin'ny asidra solifara manjavozavo, mora levona amin'ny mangotraka Ny asidra hydrochloric dia simika marin-toerana, ary ahena ho sulfida barium miaraka amin'ny karbaona izy io. Tsy hiova loko izany rehefa mifanena amin'ny hidrôzenina hidrôida na gazy misy poizina eny amin'ny rivotra izy. Izy io dia vokatra avo lenta amin'ny vokatra an-trano mitovy amin'izany, manome ny hakitroky avo sy avo lenta.
Ampiasaina be amin'ny loko vita amin'ny loko, pataloha miorina amin'ny rano, fonosana vovoka, pad freins, plastika, fingotra, chips, vera ary saha hafa.
Fanontam-pirinty, dia afaka mitana ny andraikitry ny anti-antitra, anti-exposed, mampitombo ny firaiketam-po, loko mazava, mamiratra ary tsy mihena.
Vary vita amin'ny kodiarana, kodiarana mitaingina, ravin-tady, kasety, plastika enti-miasa dia afaka manatsara ny fahanterana manohitra ny fahanterana sy ny fanoherana ny toetr'andro amin'ny vokatra, ny vokatra dia tsy mora mihantitra ary manjary malemy, ary afaka manatsara be ny farany vita, mampihena ny ny vidin'ny famokarana, toy ny firakotra vovoka ny mpanefy lehibe no fitaovana lehibe indrindra hanitsiana ny hakitroky ny vovoka mba hampitomboana ny tahan'ny famoahana vovo.
Fitaovana fanaovana taratasy-miasa (fitaovana apetaka indrindra), fitaovana tsy mahazaka lelafo, fitaovana anti-X-ray, fitaovana cathode bateria, sns. Samy afaka mampiseho fampisehoana miavaka izy ireo ary ampahany lehibe tsy maintsy ilaina sy ilaina amin'ny akora mifandraika amin'izany.
Ny seramika hafa, ny akora vita amin'ny vera, ny bobongolo vita amin'ny resina manokana, ny fizarana haben'ny zana-kazo vita amin'ny barium sulfate sy ny titane dioxide compound, dia misy fiantraikany synergistic amin'ny dioxide titanium, amin'izay mampihena ny dioxide titanium.
Ny fenitry ny kalitaon'ny sulfate Barium: GB / T 2899-2008
Anaran'ny mpanondro Vokatra kilasy voalohany Vokatra kilasy faharoa
Barium sulfate,% ≥ 98,0 96,0
Sanda PH 6.5 ~ 9.0 6.5 ~ 9.5
Tsy voavaha rano,% ≤ 0.30 0,35
Miovaova amin'ny 105 ℃ ，% ≤ 0.30 0.30
Vy (isaina ho Fe),% ≤ 0,004 0,006
Sulfide (amin'ny S) ，% ≤ 0,003 0,005
Rano,% ≤ 0,20 0,20
Fitrohana solika ，% 10 ~ 30 10 ~ 30
Fonosana sy fitehirizana sulfatey Barium:
Fonosina amina harona plastika nilahatra 25kg, 50kg, lanja 1000kg isan-kitapo, voatahiry ao anaty trano fitahirizana maina. Aza mitahiry sy mitatitra amin'ny zavatra miloko mba hisorohana ny fandotoan'ny loko. Tantano am-pitandremana rehefa mametraka sy mampidina entana mba tsy ho simba ny fonosana.
Previous: Kaolin matihanina sinoa ho an'ny fambolena - kaolin calcined - paosy soavaly
Manaraka: Sulphate barium ho an'ny vera
Simenitra solifara Barium
Mpanamboatra solifara Barium
Sulphate Barium voafintina
Barium sulfate ho an'ny fingotra
Sulfat barium voajanahary
Solifara barium sulfat
Barium sulfate ho an'ny batery
Sulfate barium novaina
Nano barium sulfate